Knowledges Zone: Virus ကြောင့် ပျောက်နေတဲ့ Tools တွေကို ဘယ်လို ပြန်ပြင်လို့ရနိုင်မလဲ
. Folder option ပျောက်ရတာနဲ့ Run Box ပျောက်ရတာနဲ့ အမျိုးမျိုးပါပဲ . အခုဒါလေးကတော့ လွယ်လဲလွယ်တယ် . သုံးရတာလဲ အဆင်ပြေပါတယ် . ကဲသုံးကြည့်လိုက်ပါဦး . သူပြန်ဖော်ပေးနိုင်တဲ့ (၁၀)မျိုးကို အောက်မှာ ရေးပေးထားပါတယ် . ကျွန်တော်တို့လဲ အဲ့ဒီ့ ဟိုဟာပျောက်လိုက် ဒီဟာပျောက်လိုက်နဲ့ ပြန်ပြန်လုပ်နေရတဲ့ ဒုက္ခကလဲ မသေးလှပါဘူး . တစ်ခါတစ်လေ လုံးဝသုံးမရလို့ ၀င်းဒိုးအသစ်ပြန်တင်ရတဲ့အခါတွေလဲ ဒုနဲ့ဒေးပါ . ကျွန်တော်အောက်မှာ Download လုပ်ဖို့ကိုပါ တင်ပေးထားပါတယ် . သူကလွယ်ပါတယ် . enable ပေးလိုက်တာနဲ့ ပြန်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် ..